Indawo yoLonwabo ye-OTDYKH iya kubanjwa eMoscow ngoSeptemba 2021-7
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » Indawo yoLonwabo ye-OTDYKH iya kubanjwa eMoscow ngoSeptemba 2021-7
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Indawo yokuZonwabisa ye-OTDYKH
Ukulandela impumelelo yomboniso wohambo kunyaka ophelileyo ngaphandle kwemiceli mngeni, i-OTDYKH ibuyile kuhlelo lwe-27. Umnyhadala uzakubanjwa ngoSeptemba 7-9 kwaye uzakubanjelwa kumabala emidlalo e-EXPOCENTRE.
Kuza kubakho iinkampani ezingama-400 ezivela kumazwe ali-16 kwaye imimandla engama-50 yaseRussia kulindeleke ukuba ithathe inxaxheba kulo msitho wenkulumbuso wokuhamba nokhenketho.
Ingingqi yeqabane elisemthethweni le-2021 expo yiNizhny Novgorod.
Ababonisi abaninzi bamazwe aphesheya kulindeleke ukuba babuyele kulo mboniso ubalulekileyo wokuhamba.
Kulo nyaka kuqikelelwa ukuba ziinkampani ezingama-400 ekulindeleke ukuba zizimase ukusuka kumazwe ali-16 nakwimimandla engama-50 yaseRussia. Kwakhona, iOTDYKH Leisure Fair isetelwe ukubonisa ukuba kutheni ingumboniso wokuqala wokuhamba nokhenketho eRashiya.
Kulo nyaka kubuya ukubuya kwabaxhasi abaninzi bamanye amazwe. Amazwe aya kwi 2021 OTDYKH yoLonwabo zibandakanya iSpain, iSipro, iBulgaria, iThailand, iTshayina nezinye ezininzi. Amazwe aliqela aseLatin America aya kuthi abonise ezona zinto zibalaseleyo kwezinikezelwa ngamashishini abo okhenketho.
Elinye lala mazwe yiCuba, eya kuthi ithathe inxaxheba nge-100m² stand, ephawula inguqu ebuyela kwifom yangaphambi kobhubhane yomboniso. Umboniso uyavuya ukwamkela umntu omtsha oza kumsitho; Ummandla waseCeará eBrazil, oya kuba ne-stand ekhethekileyo. Ummandla ubekwe kumantla mpuma eli lizwe kwaye yenye yeendawo eziphambili zabakhenkethi eBrazil. Umbuso uqhayisa ngeekhilomitha ezingama-600 zonxweme olunesanti kunye nemida yeHlathi leSizwe laseAraripe.
Umboniso ukwamkela nenkampani yokundwendwela yaseMexico 'iiNdwendwe ezisixhenxe' ezinamava ngaphezulu kweminyaka engama-25 yamava kushishino lokhenketho. IiNdwendwe ezisixhenxe ziya kuthatha inxaxheba kude kwaye zibonisa ukwahluka kwezokhenketho lwaseMexico, kubandakanya iilwandle zaseMexico zokuphefumla, izithethe ezityebileyo, ukutya okwenyani kunye nenkcubeko eyahlukileyo. Bazakube bebonisa iindwendwe ezintle eMexico.
Ezokhenketho eRussia bezisenza ukubuya okunempilo, kwaye ngeli xesha i-e-Visa entsha yaseRussia yenza ukuba kubelula nokundwendwela ilizwe. Xa kuziwa kwimimandla yaseRussia, abafikayo ababini bazokujoyina i-OTDYKH Leisure Fair. Eyokuqala ingingqi yaseKhanty-Mansi, ikhaya leCawa yobuOthodoki entle yovuko. Owesibini ngummandla waseKrasnoyarsk owaziwa ngokuma okumangalisayo kwendalo. Ikomkhulu lommandla uthathwa njengeyona dolophu intle eSiberia.